Iihambo zohambo lwasendle
Masicwangcise uhambo lwakho olulandelayo.
Umbutho, iSikolo, okanye igama leNkqubo:
Yeyiphi iphakheji yohambo?
Sazise imihla oyithandayo kunye nexesha leeyure ezimbini:
Sixelele ukuba uve njani ngathi:
Enkosi ngesicelo sakho soHambo lwaseNdaweni. Nceda uqaphele ukuba ugcino-ndawo olwenziwa kwi-intanethi luqwalaselwa njengezicelo. Ixesha/umhla oceliweyo unokufumaneka okanye ungafumaneki. Umnxibelelanisi wethu weShishini uza kunxibelelana nawe kungekudala ukuxoxa ngeenkcukacha malunga nohambo lwakho olulandelayo!